Ny toetra 7 an'ny mpiasa sosialy | Martech Zone
Ny toetra 7 an'ny mpiasa sosialy
Alarobia, Novambra 6, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny Alatsinainy, nizara ny sary avy amin'ny Blue Focus Marketing izahay, Ny marikao toy ny planeta, manome porofo sy fampitahana tsotra izay miresaka ny herin'ny fampiasana ireo mpiasanao hanampy amin'ny fampitomboana ny dian-tserasera. Mihoatra ny fanakoako ny marikao izany, araka ny hitanao ao amin'ny sary vaovao.
Rehefa manazava ao amin'ny boky amidy Amazon indrindra izahay, Ny mpiasa sosialy: ny orinasa lehibe manao asa sosialy, tsy misy diso fa miova ny fifandraisan'ny marika amin'ny mpanjifany sy ny mpiasa ao aminy. Ao amin'ny bazary niomerika, ny feo tena izy an'ny mpiasa ara-tsosialy dia mety ho fananana matanjaka indrindra amin'ny fananganana fifandraisana maharitra sy mavitrika amin'ny mpanjifa ary mpikambana manan-danja amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera.
Ny fandraisan'anjaran'ny mpiasa, ny fampidirana ny asan'izy ireo amin'ny haino aman-jery sosialy, ny fanoloran-tenany ho an'ny orinasa, ny fahaizany miara-miasa, ny fahaizany mihaino, ny fahaizan'ny mpanjifa ary ny fahaizany mitaona ny fanovana eo amin'ny fikambanana dia toetran'ny mpiasa sosialy mahafinaritra iray avokoa. Izao fotsiny no mila ataonao dia ny mitady azy ireo!
Ny Tatitra SoDA 2013 - Boky 2